I-Redmi K20 ayizukuyenza ngaphandle kwe-3.5 mm audio jack | I-Androidsis
I-Redmi K20 ayizukuyenza ngaphandle kwe-3.5mm audio jack
Sele zikhona ii-smartphones ezininzi ezishiye ikhonkco ezi-3.5 mm. Oku, ngaphezulu kokuba luhlobo lwangaphambili, kuye kwavela ukuba kungumthombo wokungoneliseki kuninzi lwabasebenzisi, abangaziboni bekulo mhlaba ungenalo olu phawu. Kodwa, kwintuthuzelo yabo, ijongeka ngathi isiphelo siphezulu.
El Xiaomi yam A2 luhlu oluphakathi oluthe ndlelantle kwi-jack edumileyo yeaudiyo, umzekelo, ngelixa lesibini kunye Isizukulwana sesithathu sePixel isuka kuGoogle nayo, ukongeza kwezinye iimodeli ezivela kwabanye abenzi. Nangona kunjalo, el Redmi K20 ayizukulandela le meko ibonakala, njengoko iyakusebenzisa i-3.5 mm audio jack.
Ukulindela okujikeleze ukumiliselwa kwesi sixhobo silandelayo kuRedmi, inkampani ezimeleyo kaXiaomi ngoJanuwari walo nyaka, kuphezulu kakhulu, kwaye ngakumbi ngoku IbinguLu Weibing, umphathi weRedmi, oqinisekisile ukumiliselwa kwejack audio kwiRedmi K20, que Iya kuxhotyiswa ngekhamera engasemva ye-trplie y isizukulwana sesi-7 kwisiboniso sokubonisa iminwe.
Isinxibelelanisi sejack ye-3.5mm eqinisekisiweyo yeRedmi K20 nguLu Weibing
Uthi inkampani igqibe kwelokuba igcine i-3,5mm audio jack njengabalandeli bayo. Ngeziphumo zesandi sokukhulisa isandi seMi, eyinkqubela phambili yenkampani, Isixhobo siya kuqinisekisa umgangatho ophuma kwisandi, eye yaphumelela inkqubo yokuqinisekiswa kwesisombululo esiphezulu.
I-Redmi K20 inokuqhayisa ngexabiso eliphantsi kakhulu
Ngoko ke, I-jack yale mobile ayisayi kuba yinto eqhelekileyo, kodwa ikomgangatho ophakamileyo oya kuthi ubonelele ngokuvakalayo nangokucacileyo, njengoko sinokuqinisekisa nakupapasho lwe-CEO kwinethiwekhi yoluntu yaseTshayina. Ngomhla wama-28 kuMeyi, ongu umhla wokusungulwa kwayo, siza kuva ngale nto kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Redmi K20 ayizukuyenza ngaphandle kwe-3.5mm audio jack
I-Samsung Cloud iya kunciphisa indawo yokugcina yasimahla ukusuka kwi-15 GB ukuya kwi-5 GB
IGoogle Duo yonyusa inani labathathi-nxaxheba kwiifowuni zevidiyo